Gbasara Anyị - NEW agba mara mma CO., -Ejedeghi
New agba Mma Co., Limited
bụ ụlọ ọrụ ọkachamara a pụrụ ịtụkwasị obi nke Gel Polish na China.
Kemgbe 2010, anyị na-eme nchọpụta, mmepe, mmepụta, ire ere na ọrụ nke ngwaahịa ngwaahịa UV Gel Polish.
Ngwaahịa anyị gụnyere: gel gel atọ, gel ụkwụ abụọ, otu ọkwa gel, akwa na isi ala gel onye na-ewu ụlọ, polygel, Mee gel ka ike
Eserese gel, Agba dị ọcha, gel Platinum, gel jelii,
Bokwanye Gel na Na. Enwere karịa 2000 agba yana ndị otu R&D na-arụsi ọrụ ike,
agba ndị ọzọ na gel na-esonye
Okwukwe anyi bu “Green & Health, Magburu onwe ya mma, Ejiji, Accountable, ezigbo Cost, Mbụ-ọnụego Service“. Iji duzie mmepe ahụike nke ụlọ ọrụ a, anyị na-ekwusi ike iji gaa n'okporo ụzọ ndị na-emepụta gburugburu ebe obibi, ndị enyi na ahụike gel. Ndị ahịa anyị niile nabatara asambodo nke SGS, FDA na GMPC ma zute iwu ahịa mpaghara na oke osimiri.
Usoro anyị dị mma na mkpuchi, mmetụta agba dị mma, ederede dị mma na ogologo oge, ihe ọ bụla sitere na isi ihe ma ọ bụ pigmenti, bụ ndị na-adịghị egbu egbu na ndị na-adịghị njọ, ha niile bụ ihe iri na 10 n'efu ma ọ bụ naanị mepụta mgbe ndị ọrụ nyocha ụlọ na-enyocha onwe ngwongwo ndị ahụ. Iji jide n'aka na gel jel niile na nkwụsi ike dị mma, anyị nwere usoro nrụpụta siri ike, ngwa nrụpụta dị elu, usoro nyocha QC, ndị ọrụ ntanetị & ndị ọrụ a zụrụ azụ.
Enwetaghị ejiji na-emekarị na-akwado omenala ika aga na, anyị nwere pụrụ iche otu ịzụlite ọhụrụ usoro na ọhụrụ na agba kwa afọ, na-akwado ndị ahịa na dị iche iche na ụdị nke ahaziri nkwakọ, gụnyere biri ebi karama, onwe labeelu na agba igbe .With ihe karịrị 150 nkà ndị ọrụ na mmepụta ihe, anyị na-enye nnukwu ikike na oge na-eduga ngwa ngwa.
Mmadụ Bịa na kọntaktị na anyị, anyị na-atụ anya ịga n'ihu na gị ọnụ na gel polish ụlọ ọrụ site na mmeri-mmeri ọnọdụ!